Storyworks1: A Location-Aware Digital Ahịa Content Nzipu Platform | Martech Zone
Akụkọ nke abuo: Ebe a-Aware Digital Sales Content Delivery Platform
Tuesday, July 7, 2015 Douglas Karr
Ọrụ akụkọ 1 na-enye ihe ngosi nkwukọrịta mkpanaka iji jikọọ mpaghara otu gị na ngwaọrụ iji nyere aka bulie ntụkwasị obi obi, kwado usoro azụmaahịa yana igbu ahịa, ma bulie mmekọrịta azụmahịa na nghọta na oge iji rụọ ọrụ.
Ihe omume 1 ọhụrụ Ogbe Ohere na-enye ndị ọrụ ire ahịa ikike iji mekọrịta ọnọdụ ha ugbu a na CRM site na ngwaọrụ mkpanaka iji depụta atụmanya dị nso na ebe ndị ahịa na profaịlụ. Ohere Ohere na-ahazi ozi dabere na mpaghara onye ọrụ ugbu a, na-ebute ohere ịhọpụta ohere ma chọta ozi kọntaktị ugbu a site na ọchụchọ isiokwu dị mfe. Site na Onye Ohere Ohere, ndị ahịa nwekwara ike bulite ozi site na oku na nzukọ na ụlọ ọrụ CRM.
Ozugbo emere, Onye Ohere Ohere na-arụ ọrụ site na ịmekọrịta ya na ọnọdụ onye ahịa ugbu a site na ngwaọrụ mkpanaka ya. A na - ewepụta ozi site na ụlọ ọrụ CRM na ngwaọrụ dabere na data mpaghara na usoro nyocha. A na - enweta ozi dị mkpa gbasara onye ahịa kachasị nso na ọfịs na - ele anya gụnyere itinye ohere ọ bụla site na ịchọ ọchụchọ na / ma ọ bụ aha ikpeazụ. Oku na nzukọ nwere ike ịbanye na CRM site na Opportunity Locator, na-ewepụ njem ịlaghachi n'ọfịs.
Ọ dị oke mkpa na ndị ahịa na-ebuli oge ha n'ọhịa iji mezuo ọrụ kachasị elu. Ohere Ohere bu otu n’ime ngwa oru mbu iji were ike nke CRM ma sugharia ya n’ime oru oma nke oma. Ikike inweta ozi dị mkpa gbasara ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike ịbanye na mpaghara ebe ezubere iche na-enye ndị na-ere ahịa ohere itinyekwu nzukọ, belata oge ekwentị na oge email, ma zere njem na-enweghị isi laghachi n'ọfịs iji nweta CRM. Nke a na - enweta uru pụrụ iche maka arụmọrụ maka ndị na - ere ahịa, ma belata ọnụ ahịa ohere maka ụlọ ọrụ ahụ. Jeff Fritz, onye isi oche nke Storyworks1
Akụkụ nke Storyworks1
Nweta ọdịnaya na-anọghị n'ịntanetị - ịnweta ọdịnaya ịchọrọ na ma ọ bụ na-enweghị njikọ, a na-emekọrịta ọdịnaya na ngwaọrụ gị maka ịnweta offline.
Ngwakọta dị njikere - jikọọ na teknụzụ azụmaahịa ị jirila taa dịka Salesforce, Netsuite, Dropbox, Oracle, Blackboard na ndị ọzọ. Ihe ikpo okwu anyi na eche.
Enwekwu ume n'ọhịa - Ahịa ga - enwe ihe kachasị ọhụrụ na desktọọpụ, laptọọpụ, mbadamba, ma ọ bụ ama.
Otu ebe maka ngwa ahia gi - otu a haziri ahazi, gaa-isi mmalite maka ngwa ahịa gị niile. Bịaruo nso mfe gị ahịa usoro.
Omenala tinye - ihe mgbakwunye na-akpakọrịta nke na-enyere aka igosi uru. Nyefee ahụmahụ ịzụ ahịa nke kwesịrị icheta.
Dị mfe iji teknụzụ ahịa - emeputara ikpo okwu site na ala iji kwado onye ahia ahia.
Tags: Bọọdụdijitalụ ahịa ọdịnayaDropboxnetsuiteOracleọdịnaya ahịanjikwa ọdịnaya ahịaahịa dijitalụ ọdịnayandị ahịaọrụ akụkọọrụ na-achọakụkọ akụkọ1
4dị ọdịnaya B2B kachasị dị irè?
RivalIQ: Asọmpi Social Media na SEO nchịkọta